Izay tiana no safidiana
Sarotsarotra ny fisafidianana ny « coussins » satria tsy toy ny ondana izy. Maro be ireo endrika ahitana azy ary maro toy izany koa ny sarisary amin’ny lamba azo hisafidianana aminy. Zava-dehibe ny fisafidianana azy ireo araka ny loko tianao sy ny endrik’ilay efitrano
Fisafidianana ny habeny
Tsara ihany koa raha atao samy hafa ny haben’ireo “coussins” hampiavaka ny fijery azy ireo, raha vao mitopy any fotsiny ny maso. Telo izy ireo no tsara miaraka ka efamira ny iray, efajoro ny iray ary kelikely kosa ny fahatelo farany. Atao mifanakaiky izy ireo rehefa mametraka azy.
Fahaizana mijery ny lokony
Ilaina ihany koa ny mampitovy ny lokon’izy ireo amin’ny seza lava na ireo seza efa ao an-trano. Tsy tokony hifanipaka be loatra fa hisy rindrany ihany izany. Azo atao koa nefa ny manome aina ilay seza lava ka mampiasa “coussins” miloko marevaka kokoa.